Fotoam-bavaka eokumenika Alahady 28 Jona 2020 – Communauté Catholique Malgache de Grenoble
Toy ny isan-taona dia iarahantsika mankalaza ny fitsingerenan’ny fetim-pirenena 26 jiona.
Misy ny fotoam-pivavahana ekomenika iaraha-manao, izay anandratana ny fisaorana Azy Tompo ary koa fanankinana Aminy ny tany mamintsika. Eo no ambohi-pihaonana, arahina korana, tafa sy dinika. Manasa koa antsika tsirairay avy, hahatsiaro ireo mpiray tanindrazana amintsika izay sahirana, ka hanolotra izay foy entina manampy azy ireo.
Saingy iarahantsika mahalala, ary koa niarahantsika niaina ny valan’aretina ‘Coronavirus”. Izany anefa dia tsy hanakana antsika hanefa ny adidy amin’izy ireo. Ny manampahefana dia efa nanome alàlana ny hivoriantsika. Misy fepetra tsy maintsy arahina sy tanterahina anefa izany.
Koa dia raikitra ary fa dia hotanterahina ny fihaonantsika
ny alahady 28 jiona 2020 ao amin’ny eglizy St Bernard, amin’ny efatra ora hariva tsy diso.
Indreto avy ary ireo fepetra tsy maintsy arahina sy hampiharina amin’ny fomba hentitra sy mahomby amin’io fotoana io : tokony hanaraka ny rindrandamina napetraka ny tsirairay :
➢ Ny fanaovana saron-tava (masque) fiarovana dia tsy maintsy atao
➢ Hisy gel hydroalcoolique fanasana tànana eo amin’ny fidiran’ny fiangonana
➢ Aoka samy hanaja ny marika eo amin’ny tany sy ny halavirana (1m), sy ireo rindrandamina napetraka eny amin’ny seza
➢ Voafetra ho 41 ihany no isan’ny olona azo raisina ao am-piangonana.Rohy ahafahana misoratra anarana ho an’ireo izay te hanatrika izany,https://forms.gle/HggWiuvq8RQ9QC2x7.Izay tsy afaka hanatrika dia entanina manokana hanaraka ny fankalazana amin’ny alàlan’ny YouTube. https://youtu.be/dWvzKL66HfQ
➢ Manome toky koa ireo izay hanatrika fa hanadio ny trano fiangonana araka ny fepetra atolotry ny ministera aloha sy aorian’ny fihaonana, hisorohana ny fihanaky ny valan’aretina.
Farany, ho fanampiana ny mpiray tanindrazana amintsika dia nanokatra Rakitra antsoina hoe “Leetchi” izahay.
. Azon’ny tsirairay atao ny manohana io fikambanana io amin’ny alàlan’ny fandefasana ny fandraisana anjara, amin’ny endrika fampanantenana fanomezana (promesse de don) mivantana any amin’ireo mpitahiry vola. Hisy ny torolàlana halefa amintsika momba izany tsy ho ela.
Mino sy manantena ny fahalalahana tànana ny fikambanana ” LES ENFANTS DE L’ECOLE VERTE DE KIANJAVOLASOA. ” Manentana antsika handray anjara. Ny adidy hono tsy an’olon-dratsy.
Ny momba ny tonohena, masikita fanaontsika dia hahemotra any aoriana kely, mba hahafahan’ny rehetra ho tonga, ka hanararaotra tanteraka izany fihaonana izany.